Ama-MockupsJar: Ama-Stock Mockups weselula ne-Desktop | Martech Zone
ULwesine, April 9, 2015 Douglas Karr
Kukhona ngempela imakethe yanoma yini - ikakhulukazi ezweni lobuchwepheshe bokumaketha. Ngikholelwa ngokuqinile ekongeni isikhathi futhi angenzi lutho olusebenza kanzima kabili. Ama-MockupsJar ingenye yalezi zinsizakalo.
Esikhundleni sokuqasha umthwebuli wezithombe futhi ubathathe izithombe zohlelo lwakho lokusebenza noma isayithi ku-smartphone, ideskithophu noma kusiphequluli - kungani ungatholi isithombe esikhiqizwe kahle ngokukhanyisa okuhle bese ungeza isithombe-skrini sakho kuso ukuze uthole inzuzo enkulu?!
IMockupJars ilula impela:
Khetha okukodwa kokuncishiswa kwabo okukhethiwe. Sinezinhlobonhlobo eziningi kuma-mockups lapho ungakhetha khona eyodwa.
Layisha isikrini sohlelo lwakho lokusebenza noma thatha iwebhusayithi ebukhoma ngokufaka i-url bese isithombe sizoguqulwa ukuze sikuthande.
Landa i-mockup yakho ezinqumweni eziningi.
Bookmark Ama-MockupsJar futhi ulinike idrayivu yokuhlola ukubona umhleli wabo we-monster. Sebevele benze umsebenzi onzima ukuze umklami wakho akwazi ukugxila emsebenzini obalulekile!
Tags: ukukhishwa kwe-androidukukhishwa kwe-apulaukukhishwa kwesiphequluliukukhishwa kwe-iphonemockup mobileumagazinei-samsung mockup